မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၅,၁၅၀ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၇၃ဦး ထပ်မံသေဆုံး - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ ၃၀ ရက်တွင် မလေးရှားနိူင်ငံ၊ Selangor ပြည်နယ်၊ Klang မြို့၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက COVID-19 စမ်းသပ်ရန် အမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ နှာခေါင်းတို့ဖတ်နမူနာ ရယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကွာလာလမ်ပူ၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသူ ၅,၁၅၀ ဦးရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၌ စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ ၆၇၃,၀၂၆ ဦးထိ ရှိလာကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အသစ်ကူးစက်ခံရသူများအနက် ၃ ဦးမှာ ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများဖြစ်ပြီး၊ ၅,၁၄၇ ဦးမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Noor Hisham Abdullah က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
လတ်တလောတွက် lockdown ချမှတ်ဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း ကူးစက်မှုများလျော့ကျခဲ့ကြောင်း၊ အထူးကြပ်မတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်မှာမြင့်မားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုမိုကူးစက်တတ်သောမျိုးကွဲများပြန့်ပွားမှုကြောင့်ပိုမိုတိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်းပိုမိုပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူနာများပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်ပိုမိုကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။
လူနာများတိုးများလာချိန်တွင် ဆေးရုံများနှင့်ပူးပေါင်း၍ လူနာများအားပိုမိုဂရုစိုက်နိုင်ရန် နှင့် အခြားအခြေအနေမျာအကြား ပုံမှန်ကုသရေးဌာန များတွင်လည်း အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် အတည်ပြုလူနာ၇၃ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၄၁,၄၂ဦးထိ ရှိလာသည်။ပြန်လည်ကျန်းမာသက်သာလာသည့် လူနာ ၇,၂၄၀ ဦးရှိရာ စုစုပေါင်းပြန်လည်ကျန်းမာလာသူဦးရေ ၆၀၀,၉၃၅ ဦး သို့မဟုတ် ၈၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။အတည်ပြုလူနာ ၆၇,၉၄၉ ဦး ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၉၂၄ ဦးမှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ၄၅၃ ဦးမှာ အသက်ရှူစက်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Malaysia reports 5,150 new COVID-19 cases, 73 new deaths
KUALA LUMPUR, June 16 (Xinhua) — Malaysia reported another 5,150 new COVID-19 infections, the Health Ministry said on Wednesday, bringing the national total to 673,026.
Health Ministry Director-General Noor Hisham Abdullah said inapress statement that three of the new cases are imported and 5,147 are local transmissions.
The official said that while the current lockdown had reduced cases, the number of severe cases requiring intensive care and assisted breathing remains high, due to the spread of more contagious variants that lead to more severe symptoms inashorter period of time and also take longer time for patients to recover.
In response, the capacity to care for patients is being increased through cooperation with more hospitals and normal wards being repurposed to serve as intensive care units among other measures, he said.
Another 73 more deaths have been reported on Wednesday, bringing the death toll to 4,142.
Some 7,240 patients have been released after recovery, bringing the total number of cured and discharged to 600,935 or 89.3 percent of all cases.
Of the remaining 67,949 active cases, 924 are being held in intensive care and 453 of those are in need of assisted breathing. Enditem